DEGDEG DAAWO:-Puntland Oo Weerar Qaaday Iyo Jubaland Oo Kenya lasafatay heshiisna Lagashay Wararkii Ugu dambeeyay
June 10, 2019 marqaan Entertainment, Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, News, Somalia 14
Qaar baa aniga igu maaga in aan oodaha dhacmeed sida u kala sarreeyaan u kala qaado oo aan arrimaha sidooda ba kala duwan mid kasta ka soo abbaaro jahadeeda ku beegan. Waxaa ka mid ah in bulshada Jubbooyinka iyo Puntland oogu tun iyo tan weyn aan sha’nigood ku qiimeeyo oo ku na cabbiro mansabkaas uu Eebbahoodu ku deeqay ee xaasidka lagu yahay. In aad mansabkan jira ee dhaxagalka ah wax ku salaysiiyo aad ayay uga fogtahay in aan qabiileyste ahay mise aan qabyaalad duulinayo.
Sida aan marar iyo bogag badan ba ugu nuuxnuuxsaday masiirka siyaasadeed ee Puntland iyo Jubbaland waa isku mid oo waa tiirar iyo udub uu aqal qudh ahi ku taagan yahay. Taariikdhooda faca weyn ee u gaarka ah ayaa gundhig u wada ah. Falsafaddooda sooyaalkooda ka unkan ayaa u ruuxiyad iyo naqas ba ah. Waxaa iiga muuqata in sidii taariikhdoodii looga dhabqiyay xilligii qaranka Soomaaliya la yagleelay iyo intii ka dambeysay ba haddana masiirkooda isku midka ah looga dhabqinayo hadii aanay nacabka sokeeye iyo kan shisheeye ba qummaati iskaga jirin.
PUNTLAND AND JUBBALAND ARE LINKED BY A COMMON HISTORY, HERITAGE, AND VALUES. INSEPARABLE TWINS.
KENYA”: Oo Ka Adkaatay/Soomaaliya Maanta” Waxay Tiri?……
(Hadaad Soomaali/Tihiin/Hadaad Laangaab Tahay Ha Noqon Maangaab.)kkkk
1) – Dhisida haykal dowladnimo iyo dariiqad qaran ma’ahan wax sahlan …… kamuuqdo jiilkan cusub, kaas oo kaduwan fikirka kajiro soomaaliya ee …? (somalia/good/luck-and bad/luck/who know
Doofaar si kasta oo uu isku nadiifi is yidhaahdo daahir uma noqdo.
Sheekadaadu waa Qabiil ka hadal. Waxay ka unkantaa Daarood, Hartina wey ku dhamaataa.
Maanta hadii aad arki Kari laheyd waxaad ugu yeedho ‘Sha’ni’ oo u dhiganta Buruujka Daarood. Oo marka lasii tafaariiqeeyo usii dhiganta in Daarood Soomaalida kale ka sareeyo. Taasood doqoniimo daraadeed dhab u aaminsantahay. Isku soo duuduuboo arki laheyd Daarood oo Soomaalida kale ka sareeya maantha si wanaagsan ayaad u dhiman kari laheyd. Maanta’se hadaad adoo sidan oo kale u niyad jabsan dhimato iilka ayaad ku galgalan laheyd.
Hadaba aan wax kuu sheegee Daarood weligiis Soomaali kamuu sareyn. Soomaaliduna kumanaan sano ayay ku noolaayeen Geyiga Geeska Afrika. Diintii Iskaamka horteed waxeynu aheyn cawaan sanamyo caabuda. Labo qeydleyaal geela kala dhaca.
Weligiinba Dawlad iyo Gumaysi ayaydin cudud ku hoos laheydeen. Sidaasi la’ajligeed kolkii Siyaad Bare iyo Beeshiisa Daarood ee gar iyo gardaroba ku difaaceysay la cudud la’iskaga dul qaadey ee ay noqotey nimow naftaa nabiyow umadaa ee Qabiil Walba Deegaankiisii ku laabtey waataas ay soo baxdey Daarood Awoodiisii. Taasoo ah inaaney Dadka kale ee Soomaaliyeed waxba dhaamin.
Shacni ka lumay iyo feynuus Dawladeed oo soo gaadhi waayey mabjiro. Daarood iyagaa Dawlada Soomaaliyeed ee jirtey intii 1991kii ka horeysay hogaankeeda ugu badnaa. Gebigoodiiba intii wax garaneysay iyagaa Muqdisho iskugu biyo shubay oo jeebadaha buuxsadey. Dadkooda iyo Dhulkooda iyo Dhulka Soomaaliyeed ee kaleba wey kari karayeen iney wax gaadhaiiyaan oo horumariyaan. Iyagaa ku dhacay imtixaankaas.
Waxba cadhada hakula dul xoqan Isaaq iyo Hawiye. Isaaq iyo Hawiye waxey ka dhiidhiyeen tacadiyadii, Dawlad xumadii iyi xaqdaradey Xukuumadii Afweyne hogaaminayay ee Daaroodna intiisa badani taageerayeen ku hayeen shacabkii kale ee Soomaaliyeed.
Sheekadaada marka si walba loo rogrogo waxey iskugu soo biyo shubaneysaa inaad rabto in Daaroodku Soomaalida kale ka sareeyo.
Soomaali dhab ah hadaad tahay fiiradaadu sidaas umey gaabnaateen, hamigaaguna sidaas uma guracnaadeen.
Ma qaaxadii nacaybka Daarood baa durba kugu kacday sidaadii waa adiga nagu dul qufacaya ee? Hah, waan ka xumahay miskiinkoow. In aad u dhiman waa hubanti dabacayuunoow. Dukhsi sanka iga marmara uun baad agtayda ka tahay ee la soco.
Waxaad sidaadii isku kashiftay hadalkan aan soo naqliyay:
“Diintii Iskaamka horteed waxeynu aheyn cawaan sanamyo caabuda. Labo qeydleyaal geela kala dhaca”.
Kuwiinan is irirsada uun baad runta ka sheegtay oo caynkaas u dhaqmi jiray. Laakiin Shiikh Daarood Bin Ismaaciil isaga ayaa ba ahaa wadaadkii Islaamnimada idiin keenay oo kufrigaa aad isku caddeysay idin ka xoreeyay. Dhashiisu na waa kuwii ilbaxnimada iyo xadaaradda idin ku soo biiriyay.
Ka xaaxaabi haddaba waataas iyadii oo duuduuban ee! Khara!
@ Suldaan Prof Cusman Cawad
Suldaan Ahmed Snm wuxu caawa Daacay Cudurki Isaaq oo dhan ku jirey oo ahaa ”’ Daarood Nacayb ”’
Maalin dhaweyd ayaan Nin Ciidagale ah kula kaftamay Dubai wuxuuna ii sheegay sheeko aan caqliga geli karin taasoo ahayd ”’ Ciidagale ayaa ka badan Ogaden ”’ intaan qoslay ayaan ku iri Ethiopia ayaa Tirakoobkeedi Kililka somalida waxay sheegtay in Ogadeenku yahay ”Nation ” ee aysan ahayn Qabiil .
Ninki ciidagale xoog ayu uga xanaaqay hadalki wuxu yiri Ethiopia been bay sheegtay.
sheekadda waxaan ku keenay Nin walba oo Isaaq ah wax bu iska dhaadhiciyey oo aan taariikhda kuba jirin kuna qornayn. Hadda ahmed Snm wuxu aaminsanyahay in isaaqu la soo dagaalameen Engriska oo ay iyagu ka xoreeyeen Britishka waqooyiga somaliya.
Marka Suldaan Duulkan iidoor cuqdad baa dilootay lagamana saari karo.
Hindisihi ay hindiseen in ay wadan isaaq leeyahay samaystaan wey ka fashilantay meel ay wax u riixaana wey garan waayeen.
18 may baanu xoroobnay waxaanu ka xoroobnay Daaroodki na gumeysan jirey,,,kkkkkkk
Ahmed snm waa iska Day time Dreamer !
Ahmedow Filimki hore waa Gubtay ee mid kale la imaada Goobta !
Dad kasta oo aan taariikh ay ku faanaan lahayn waxaa ku dhaca cudurro badan oo nafsaani iyo dhimirka isugu jira ee astaamaha aad tilmaantay ay waxa lagu garto ku jiraan. Waa sababta mar kasta oo aan taariikhdeena faca weyn soo hadal qaado ay labadan iidoor dalool kasta uga fatahaan.
Ha la yaabin habo oo dheg na ha u dhigin. Waa duul aan taariikh lahayn oo dadka kale fadligooda ka dhimanaya. Kuwaas oo taariikh leh laga ma hadhsadeen xaqiiqdii. Damiir xumada haysata waxay ka caddahay in ay intaas dad kale u baahan yihiin oo ay haddana xuma ka sheegayaan. 30 sanadood iyo malaayiin doolar baa kaga dhammaaday in ay Hartiga, Samaroonka iyo Ciisaha iyo deegaamadooda ba hantiyaan.
Their desparation is more than enough proof that they are nothing without the rest of us but their seduction skills are really appalling.
@His Royal Highness Suldaan Dab La Riday,
Suldaanka sharafta iyo sha’niga huwanoow salaantii gobeed iga guddoon marka hore. Marka xiga qoraalkan hoose ee aan magaca Boqoraddeena ku soo tabiyay adiga ayaan kugu waday oo “copy and paste” baa iga qalday.
Ka raaalli noqo Suldaan.
Kkkk BUDHLAYN oo weerar qaaaday Oo TUKARAQ KA qabsatay Somaliland!
Let’s just chill out..
Geenyadii Jaraysani Ma Taqaan JIKAARKEE..JIDIIN KAAGU RAAXADA MA MID JAAHIL KA AH BAA!!??
Harti Waqooyi..ISAAQ baa kooraystaye…
Horta ma is weydiiseen cida wax fitno waloyaashiina ku faleysa. Idinka internetka ayuunbeyday ku dibiro dhacsataan. Qaar idinka mid ah sida adiga oo kale Qabiil bey halkan kaga faashadaan oo hadaanay siiba Isaaq iyo Habar Gidir Caayin ma seexan karaan. Qaar kale oo Cismaan Cawad ka mid yahayna halkan ayay khuruufaad iyo faan aan sal iyo raad toona laheyn isku maaweeliyaan.
Idinka iyo inta kale ee fitno waleyaasha ah ee dibadaha caruurahooda ku korsada ama iyaguba iskaga baashaalaya dee cidi waxba ka weyndiin meyso arimaha Somaliland iyo Somaaliyaba.
Waxa uu wakhtigu idiinku dhacayaa idinka oo kolba Marqaan Media wararka beenta ah ee uu iska soo dabo rido kolba mid maskaxda ku bogsiisanaya. Qabiil ka faashi ama caabud midna waxba lagama helo. Inta aad khahaaliga halkan uga sheekeyneysaana kolay iyo kolay naga waayi meysaan cid naga mid ah oo cagaha dhulka dib idiinku soo dhiga.
Sxb adigu goobtan qabiil uun kaga faasho. Qalinku kolba ciduu kuugu dhaco uun saarnow.
I’m watching (1990)..The GHOST
A psychic facilitats a dead banker’s return to protect his girlfriend from the man who murdered him ( Violence.adult Languages)
Ka maanka gaabani walee waa adiga. Soomalidu waxay Islaameen iyada oo aanay Diinta Islaamka ahiba aad u gun dhigin Bariga Dhexe. In other words iyadoon Carabtoo dhamiba wada qaadan diinta ayaynu inagu qaadanay Diinta Islaamka ah. Waxey Soomaalidu diinta qaadatay wax yar uun dabadeed Hijradii. Masaajidka Seylac ku yaal ee labada qiblo leh ayaa u ah daliil in Diinta Islaamku Soomaalida soo gaadhey intaanay Carabtuba wada qaadan diinta.
Kolkaas sxb waxba khuruufaad iyo been Soomaalidu isku harowsato hanoola iman. Diintu Soomaali ahaan dhankayaga ayayba kusoo horeysay oo ay idin kaga timid. Sheekhu Carab ayuu ahaa waa iska khuruufaad. Waxa lagu qiyaasaa in Diintu ina soo gaadhay illaa iyo 7th Century iyo nawaaxigeeda. Soomaaliduna wey intaas wey ka weyn tahay, weyna ka horeysay.
Hadaad aamin san tahay in Soomaalidu ka da yartahay intaas ama in Sheekh Daarood la yidhaa yimid oo diinta iyagoo cawaan ah baray, nin yahow dib iskugu nowo oo qiimee aqoontaada maskaxiyan.
Faanka, beenta iyo khayaaliga inta aad iskugu sheekeyneysaan waxa dhaanta idinta oo waaqiciga iyo waxa had jira isku mashquuliya.
Dee adiga uun baa musaska noogu dhuumanaya oo mar ba fudh ka soo dhaha marka aynu barxadahayaga ku shaaheenayno oo arrimaheena khaaska ah la haasaaweyno. Marqaan News waa website ay Hartigu leeyihiin oo xaq buuxa ayaynu yeelannay in aynu waxii nagu saabsan kaga haasawno. Maxaa adiga ku shidaya oo kaaga shan iyo toban ah illayn webkani Hargeysa iyo Burco toona laga ma laha ee? Waxaas dakhar kaa jeexan adiga ayaa soo doontay saaxiib oo dad kale badkooda u soo dhacay dee.
Marka aynu cimaamadda Woqooynimo kuu soo qaadanno na waxaynu kaa la’nahay in aad qummaati nooga qanciso waxa aad adigu duulinayso ee aad “Somaliland” ku maldahatay illayn Woqooyinimo iyo waxaagu waa mashriq iyo maqrib ee. Taariikh yar oo 30 sanadood ah ayaad isku dayaysaa in aad teena qarniyada soo jirtay ku qariso laakiin ileys sacabbo lagu ma qarin karo. Waxa “Somaliland” gooni u go’an kallifaya ee ay ku salaysan tahay naga qanci – falsafad ahaan, qaddiyad ahaan iyo hadaf ahaan inta ba.
Mise sidaadii afka iska furo oo camuudda ku galgalo. Dood ha lagu maqlo ee.
Ma waxaad imika leedahay barxadan khayaaliga ah ee Marqaan Media noo dhaaf aanu khuruufaad isku akhrinee? Kkkkkk
Dee waxaanu had iyo goor idiin saxeynaa waa inteydaan khuruufaad aad iska soo dherjiseen aydaan nagala soo dul dhicin.
Adoo miidhan oo shan wajiileeya ayaa qaar aanan ba iyo ta toona kala garaneyn oonan xitaa maskaxdooda isticmaali karin kasoo dhaadhicinaya waxaan jirin. Sida Daaroodbaa Soomaali ugu badan. Khuruufaad number kow. Daaroodbaa Soomaali ugu aslisan. Khuruufaad number Labo. Daaroodbaa Soomaali ugu facweyn. Khuruufaad number sadex. Daaroodbaa Soomaali ugu maal badan. Khuruufaad number Afar. Daaroodbaa Soomaali ugu Daacadsan. Khuruufaad number shan. Daaroodbaa Soomaali ugu cascas kkkkk Daaroodbaa Soomaali ugu Islaamsan. Daarood baa kan iyo keer Soomaalida dheer oo tiro beeshay. Markaasay iyagoo waxaas ka dheregsan kaala soo dul dhacayaan.
Dee si hore udhac ah ayaanu beenta aad jeceshihiin inaad dhurtaan idiinka saxeynaa. Inagu weynu is naqaanaa sxb. Tuug tuug ma xado. Beentiina iyo Runtiina hadey dadka kale ku dawakhaan anagu waanu kala soofi naqaanaa.
Woxoogey baanu idin yara dhaafney oo beentiinii oo lugeyneysa ayaa afaafka nooga soo geshay. Dabadeedna dee waar intaaney guryaha idinka saarin aayanu bartey joogto ugu taga oo soo cidhib tira is Nidhi. Sababtaas ayaanu illaa iyo barxadihiinii idiinka dabo nimid. Beeneey waa run ayaanu idinka dabo leenahay si ay kuwaad khuruufaadka ku akhrineysaan u baraarugaan oo ay indhaha ugu kala qaadaan in waxan laga dhaadhicineyaa yahay been.
Afaarihiina markaad ka sheekeysaneysaan dee waa iney noqdaan wax idinkana wax tar idiinku Jiro, Soomaali oo dhana anfacaya. Hadiise uu noqdo wax fitnadan Soomaaliyi kasoo waaqsan la dahay sii murjinaya dee ‘balaayo dhego la qabto ayay leedahaye dabo la qabto ma leh’. Dhegihii ayaanu cidhifyada kasoo gaadhney. Na yara suga intaanu dhagihiina oo dhan gacanta ku dhigi doono. Cabaadkan imika idinka baxayaa waxa kun jeer ka badan doona ka idinka soo bixi doona.
Kolkaas inteynaan halkaas isla gaadhin fitnadan iyo qorigan dabka leh eed la wareegeysaan joojiya dinka ayaa u aayi doona’e.
Hadii kale waa ha biqleyso. Ninkey caano ka daadaneyaan hala arkee.